‘लोकमान अभियुक्त हो, उसको कर्ममाथि निगरानी गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ « Naya Page
‘लोकमान अभियुक्त हो, उसको कर्ममाथि निगरानी गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ’
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुत्ती बिरुद्ध सुरुदेखी आवाज उठाउने मध्येका एक हुन् एमाले केन्द्रीय सदस्य एंव सांसद यज्ञराज सुनुवार । उनले पार्टी केन्द्र, संसदीय दल र सदनमा समेत लोकमान विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहे । शुक्रबार साझ भेट्दा सुनुवार निकै उत्साही र दंग देखिए । नयाँ पेजसँग भने,‘गणतन्त्रमा पनि राजा भएर हिड्न खोज्ने लोकमान अब रहदैंन, यसले कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र सबैंधानिक सर्वोच्चता विपक्षमा उभिने छुट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश जानेछ ।’ निलम्बनपछि पनि लोकमानले गरिरहेको काम उदेक लाग्दो भएको उनको तर्क छ । ‘लोकमानसिंह अब अभियुक्त हुन्, राज्यले निगरानीमा राखेर उसको कर्मलाई नियन्त्रण गर्नपर्छ, गणतन्त्रमा राजा बन्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने । सुनुवारसँग नयाँ पेजले गरेको कुराकानी :-
बुधबार अबेर एकाएक अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, रातारात प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
यो एकाएक होइन । हामीले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती प्रकरणदेखी नै आवाज उठाएका हौं । लोकमानको सपथ रोक्ने प्रयास पनि गरेका हौं । त्यसपछि पनि हामीले सदनमा मात्रै होइन सडकमा समेत आवज उठाएका हौं । तर, नियुत्ती एकल पार्टीको निर्णयमा भएको थिएन । एमालेको एक्लो असमति र बिरोधले मात्रै नियुक्ती रोकिन सम्भव भएन । यसबिचमा उनले गरेका गतिबिधीहरुलाई एमालेले नजिकबाट हेरिरहेका थियौं ।
जनआन्दोलनका दोषी, कुनैबेला अख्तियारले नै सरकारी सेवाको निम्ती अयोग्य घोषणा गरेको व्याक्ति अख्तियारको प्रमुख हुनु लोकतन्त्रको लागि लज्जाको बिषय थियो । जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेका दोषी अख्तियारको प्रमुख हुनु गणतन्त्र र नेपाली जनताको अपमन थियो । उनी यतिधेरै अयोग्य र कुरुप हुँदा–हुँदै पनि उनको कदम हेर्नु र पर्खिनु बाहेक हामीसँग विकल्प थिएन । उनको बरव्याबहार सच्चिनुको साटो झनैं मर्यादा विपरित चल्न थाल्यो । कानुनी राज्य र लोकतन्त्रलाई लज्जा हुने गरी उनले काम गरे । जनताले यो विरुद्ध आवाज उठाई नै रहेका थिए । जनताको प्रिय पार्टी हुनुको नाताले एमालेले यो कदम चाल्यो ।
लोकमानसिंह कार्की अयोग्य हुँदा–हुँदै दलहरुले नियुक्ती गरे, निकै ढिलो गरी दलहरुले आफ्नो गल्ती सच्चाए होइन त ?
त्यतिबेला निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका सबैंधानिक निकाय खाली थियो । सहमतिमा निर्वाचन गराउँनुपर्ने अवस्था थियो । यी निकायहरुको नियुक्ती पनि सहमति नै भयो । बिडम्बना उनको नाम आयो । अघि नै भने एमालेको एक्लो निर्णयले मात्रै सम्भव भएन । जे होस् त्यो दलहरुको एउटा महाभुल थियो । हामीले त्यही भेला भनेका थियौं, यो गलत भयो । त्यो हाम्रो अडान अहिले आएर पुन:पुष्टी भएको छ ।
राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट राजसभा स्थायी समितिको कर्मचारी हुँदै निजामती सेवामा छिरेका लोकमान अख्यितारको प्रमुख हुन कुनै पनि हिसाबले योग्य थिएनन् । उनी थुप्रै अनियमिततामा मात्रै होइन अपराधमा समेत सहभागी थिए । शाहीकालमा मुख्यसचिवका रूपमा जनआन्दोलन दबाउन कर्मचारीको कमान्ड सम्हालेको थिए । आन्दोलनपश्चात् उनी दोषी साबित भएको थियो । यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउनु गलत थियो । उनले नियुत्तीपछि पनि कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडाए । पदिय मर्यादा विपरित काम गरे । उनी कारबाहीको भागिदार भए ।
तर, महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेगरी बोलाइएको विहिबारको बैठक एकाएक सारियो नी, फेरि लोकमानलाई बचाउँन चलखेल भयो भनिन्छ नी ?
म अहिल्यै त्यतिपल्लो छेउसम्म पुगेर टिप्पणी गर्न चाहन्न । महाअभियोग प्रस्ताव केवल दर्ताको लागि होइन पारित गर्नका लागि हो । त्यसका लागि सबै दलहरुसँगको सहमति र छलफल आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो संसद बैठक सारिएको हो भन्ने ठिकै छ । तर, फेरि यो वा त्यो रुपमा लोकमानलाई बचाउँने वा क्षमादिने उद्देश्यमा कसैले गतिबिधि गरिहेका छन् भने जनताले क्षमा दिने छैनन् । माओवादी केन्द्रका संसदहरुले हस्तक्षार गरिसक्नुभएको छ, कांग्रेसका संसदहरुको तिव्र दबाब छ । तर, यतिबेलै कतिपय कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि र शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दौडधुप सुरु भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । यस्तो यस्तो भइरहेको छ भने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । आपत्तीको बिषय हो ।
कांग्रेसका युवा नेताहरु लोकमानसिंहको विपक्षमा भएपनि पनि उसको मुख्य नेतृत्व मौन छ, कांग्रेस विना प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन कांग्रेसको कारण लोकमानले उन्मुक्ति पाउने अवस्था त कायमै छ नी ?
कांग्रेसले कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक व्याबस्थाको लागि लामो समयदेखी लडिरहेको दाबी गर्छ । यो कुनै व्यत्ति माथि रिस वा प्रतिसोध साँधेर चालिएको कदम होइन । यो लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र कानुनी राज्य रक्षाको लागि चालिएको कदम हो । न्यायिक सर्वोच्चता र सबैधानिक व्यबस्थाको रक्षाको लागि चालिएको कदम हो ।
गणतन्त्रमा पनि राजा भएर हिड्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश पनि हो । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस यसको विपक्षमा उभिन्छ जस्तो लाग्दैन । यदि त्यसो भयो भने कांग्रेस नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले छोड्छ, जनताले साथ छोड्छ । कांग्रेसप्रतिको जनताको आस्था टुट्छ । कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पक्षमा चालिएको कदमको विपक्षमा कांग्रेस उभिन्छ भन्ने कल्पना अहिल्यै नगरौं ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि लोकमानसिंह कार्की अख्यिारको काममा सक्रिय रहेको, क्वार्टरबाटै अख्तियार चलाइरहेका तथ्य बाहिर आएको छ नी ?
पहिलो कुरा जतिबेला म्याद तामेली गर्दा सर्वोच्चका कर्मचारीहरु गए, उनीहरुमाथि अबरोध भयो । एउटा व्यक्तिसँग राज्य निरिह देखिनु, गृह प्रशासन निरिह हुनु यो आलोचनायोग्य कुरा हो । प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि उनी सक्रिय रहनु बिडम्बनापूर्ण हो । प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्बनमा परेपछि पनि उनले अख्तियारको काम गरेको बाहिर आएको छ, यो उदेकपूर्ण छ । अब उनी एउटा अभियुक्त हो । संसदले उनलाई एउटा अभियुक्त बनाएको छ । नेपाली जनताको बिचमा उनी अभियुक्तको रुपमा उभिएका छन् । राज्यले एउटा अभियुक्तको रुपमा उनलाई निगरानीमा राखेर उनको गतिबिधिहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ । उनको विगत पनि छलपकट छ ।
लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग छलफल गरिएन यो माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धन बनाएर सत्ता परिवर्तन गर्ने खेल भयो भन्ने तर्क पनि छ नी ?
यहाँ एउटा जबरजस्ती हल्ला फिजाइएको छ । पहिलो सत्तासमिकरणको स्वार्थ सहित यो आयो भन्नेहरु छन् । यो सत्तासमिकरणसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । यो केवल कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र सबैधानिक सर्वोच्चताको रक्षाको लागि चालिएको कदम हो । दोस्रो संबिधान कार्यान्वयन ओझेलमा पार्न यो कदम चालियो भनेर हल्ला पनि चलाइएको छ । यी सबै झुट कुरा हो । यो हल्ला चलाउनेहरु लोकमानको गलत कदमलाई पक्षपोषण गर्ने कुरा हुन् । म सबैलाई यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गर्छु ।
लोकमानलाई बचाउँन भारतीय राजदुत रन्जित रे सक्रिय रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् नी, भारतीय दबाबको कारण लोकमानले फेरि उन्मिुत्ती पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ नी ?
हो, भारतीय राजदुत रन्जित रे सक्रिय भएको समाचार बाहिर आएको छ । कुटनीतिक मर्यादा विपरित उनी सक्रिय भए भन्ने लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने त्यो कुटनीतिक मर्यादाको उलघङ्न र नेपाली जनताको अपमान हो । विगतमा भारतीय राजदूतको गतिबिधि हेर्दा अहिले यो कर्ममा उनी सरिक छैन भन्न सकिन्न । यदि उनी कुटनीतिक मर्यादा विपरित सक्रिय भएको भए कुटनीतिक मर्यादा मर्यादा अनुसार नै उनको हस्तक्षेपप्रति प्रश्न गर्नपर्छ, नियन्त्रण गर्न पर्छ । कुटनीतिक मर्यादा विपरित गरिने कर्म क्षामा योग्य होइन ।
अन्तमा, हिजो तपाईहरुसँगै लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको अभियानमा लागेका कांग्रेसका युवा नेताहरुलाई तपाईको सन्देश के छ ?
यो एउटा स्वाभिमानको लडाई हो । कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र सबैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा चालिएको कदम हो । गणतन्त्र र नेपाली जनताको भावनाको सम्मान पनि हो । यो शुसानसँग जाडिएको बिषय हो । कानुनी मान्यता विपरित, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको धज्जी उडाएर काम गर्नेहरुलाई कारबाही र बहिस्कारको बिषय हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र हिजो लोकमान विरुद्ध आवज उठाउनेहरुको लागि पनि यो अग्नी परिक्षा हो । हिजो उहाँहरुले उठाउनुभएको बिषय साँचो अर्थमा उठाउनुभएको हो भने नेतृत्वमाथि दबाब सृजना गर्नपर्छ ।
विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, धनराज गुरुङ लगायतका साथीहरुलाई म अनुरोध गर्न चहान्छु छिटो नेतृत्वलाई भन्नुहोस्, दबाब सृजना गर्नुहोस् । कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र सबैधानिक सर्वोच्चता विपरित हिड्ने जो कोहीलाई छुट छैन भन्ने सन्देश दियौं । यदि तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नु भएन भने हिजो तपाईहरुले केवल प्रचारको लागि बोल्नुभएको हो भन्ने सन्देश जान्छ । तपाईहरुलाई समेत जनताले पत्याउदैनन् । तर, म विश्वस्त छु, उहाँहरुले नेतृत्वलाई मनाउँनुहुन्छ ।
‘व्यापारीलाई पोस्न ओलीले जनताको जीवन दाउमा लगाएको तथ्य इतिहासले बिर्सिन्छ ?
म्यानमारमा सैन्य शासन र विश्व शान्तिको पाटो